Thriller ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
ဂျာမနီတပ်ထွက်တစ်ယောက်ဟာ သူ့မိန်းမနဲ့ ကွာရှင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူနဲ့အတူမနေရတဲ့ သမီးလေးကို သွားတွေ့ဖို့ ဘာလင်မြို့ကို ကားမောင်းလို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ် … လမ်းမှာ လူတစ်ယောက်က ဘာလင်မြို့ကို ကားကြုံလိုက်ချင်တဲ့အတွက် တင်ခေါ်လာရာကနေ လမ်းခရီးတစ်နေရာအရောက် မတော်တဆ အဲ့ဒီလူရဲ့ အိတ်ထဲကနေ ဗုံးတစ်လုံးထွက်ကျလာခဲ့ပါတယ်.. ဒီလူဟာဘယ်သူလဲ.. အဲ့ဒီနောက်မှာဒီလူဟာ သူ့ကိုဘာလင်လိုက်မပို့ရင် သူ့သမီးကိုသတ်ပစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပြီး သေနတ်နဲ့ချိန်ကာဘာလင်အထိလိုက်လာပါတယ်… ခရီးသည်ကနေ ပြန်ပေးသမား အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားတဲ့သူဆီကနေ သူပြေးလို့လွတ်နိုင်မလား ကြည့်ရှုတော်မူကြပါ။
Better Watch Out movie ဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထွက် စိတ္တဇ horror ကား အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Rotten Tomatoes 87% IMDb 6.6 ထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောငိထားသူတွေကတော့ Levi Miller,Olivia Dejonge , Ed Oxenbould တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် အခုလိုခရစ္စမတ်ရာသီမှာကြည့်ကောင်းမယ် ခရစ္စမတ် horror ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Ashley တစ်ယောက် ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်မှာ ၁၂သား Luke Lerner ကိုကလေးထိန်းပေးရပါတယ် Luke ဟာ သူမကိုမြူဆွယ်တဲ့အမူအရာတွေလုပ်တက်တာလည်း သတိပြုမိနေခဲ့ပါတယ် ထို့နောက် Luke သူငယ်ချင်း Garret အိမ်အလည်လာချိန် သူတို့တစ်တွေ အိမ်အပေါ်ထပ်ကအုတ်ချပ်မှာ ထွက်သွားရင်သေရမယ် ဆိုတဲ့စာတန်းတွေ့တဲ့အခါ…… ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ…… Garrett တစ်ယောက်အမည်မသိ သေနတ်သမားပစ်သတ်ချင်းခံရတဲ့အခါ……. လူသတ်သမားအစစ်ကဘယ်သူလဲ…… နောက်ကွယ်ကကြံစည်နေသူက ဘယ်သူလဲ…… ဆိုတာ ကြည့်ရှုသူကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစားကြည့်လိုက်နော်
အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဇာတ်ကားမျိုးကို ကြည့်ရှုချင်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက် ၂၀၁၉ထွက် ဇာတ်ကားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ လူငယ်တစ်စုဟာ မူးယစ်ဆေးတွေ သုံးစွဲရင်း အနားပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်တွေကို အနုကြမ်းစီးဓားပြတိုက်လေ့ရှိပါတယ်… ဒီလူငယ်တစ်စုထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါဝင်ပြီး သူ့ရဲ့အဖေက မြို့ကရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် သူ့သမီးဒီလိုတွေလုပ်နေတာ လုံးဝမရိပ်မိခဲ့ပါဘူး တစ်နေ့မှာ အဲ့ဒီနယ်မြို့လေးက အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို ထူးဆန်းတဲ့မိသားစုတစ်စု ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်.။ ဒီမိသားစုနဲ့အတူ ဒေါ်လာတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာတွေလည်းပါလာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဒီလူငယ်တစ်စု စုံစမ်းသိရှိပြီးနောက် တိတ်ဆိတ်တဲ့ညတစ်ခုမှာ လူငယ်တစ်စုဟာ အိမ်ကြီးကို ဖောက်ထွင်းပြီး အနုကြမ်းစီးပါတော့တယ်… အိမ်ကြီးထဲရောက်ချိန်မှာတော့ ထင်မှတ်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘဲ မုဆိုးကနေ သားကောင်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်..။
ဂန်းနမ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းလေးဖွင့်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့ဒေါက်တာဗြောင်းဆန်းဟွန်း တစ်ယောက် ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်သူ့ဆေးခန်း ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အခြားပြည်နယ်တစ်ခုကဆေးရုံတစ်ခုမှာ ဆရာဝန်အနေနဲ့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ဖို့အတွက် သားသတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှာငှားရမ်းနေထိုင်ရင်း အောက်ထပ်က သားသတ်ဆိုင်ကလူတွေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်း ပိုပိုပြီး ရင်းနှီးလာခဲ့တယ် သူသွားနေထိုင်ရတဲ့ ဒေသက မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ သူနေတဲ့နေရာနားတစ်ဝိုက်မှာ ဦးခေါင်းပြတ်အလောင်းတစ်လောင်း ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် အမှတ်မထင်ပဲ ဒီအမှုက သူ့အောက်ထပ် သားသတ်ဆိုင်က သားအဖနှစ်ယောက်နဲ ံပတ်သက်မှုရှိတာကို သိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီပတ်သက်မှုတွေကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပြီး အမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ဒေါက်တာဆန်းဟွန်းရဲ့ဇနီးပါ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်စိတ္တဇ လူသတ်သမားက သားသတ်ဆိုင်က သားအဖ လား ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရင်း အဖြေရှာကြပါစို့
မင်းသား Tobey Maguire , Jake Gyllenhaal , မင်းသမီး နာတာလီပေါ့ထ်မန်းတို့ပါဝင်ထားတဲ့ စစ်ပွဲအခြေပြု Drama,Thriller,War အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ IMDb Rating (7.1) ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ Tobey နဲ့ နာတာလီပေါ့ထ်မန်း က လင်မယား….ကလေးနှစ်ယောက်လဲရှိတယ်….Jake နဲ့ Tobey က ညီအစ်ကိုတွေ… Tobey ကတော့ အမေရိကန်မရိန်းတပ်ကဗိုလ်ကြီး… Jake ကတော့ ထောင်ထွက်အပေအတေ… အာဖဂန်နစ်စတန်ကစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ Tobey တစ်ယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲအခါမှာတော့……….။
with great power comes great responsibility’ဒီစကားစုနဲ့အားလုံးမစိမ်းပါဘူး ဒါပေမယ့်အဲ့လိုအစွမ်းတွေရလာတဲ့အခါလက်တွေ့ဆန်ဆန်စဉ်းစားလိုက်ရင် သင်ဟာဂေဟစနစ်ရဲ့အပေါ်ဆုံးနီးပါးကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ် အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းကမတူတော့ပါဘူး ဒီကားဟာပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့မတူတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲ အန်ဒရူးဟာကျောင်းမှာလုံးဝအရှုံးသမားဖြစ်သလို အိမ်မှာလည်းအဖေဖြစ်သူအရက်သမားအနိုင်ကျင့်ရသမျှခံနေရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးပါ သူ့မှာအသက်ရှင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုလို့အိပ်ယာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲနေတဲ့သူ့အမေသာရှိပါတယ် ဆေးဖိုးလည်းမတတ်နိုင်အတွက်ရောဂါကဆိုးသထက်သာဆိုးလာပါတော့တယ် အန်ဒရူးနဲ့သူ့ဝမ်းကွဲမတ်တ်နဲ့သူငယ်ချင်းစတိဗ်တို့ဟာ ရုတ်တရတ်မြေအောက်ကရေဒီယိုသတ္တိကြွအရာတစ်ခုကို ပါတီပွဲသွားရင်းတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့… ကိုယ်ပိုင်အရှုံးသမားဘဝနဲ့စွမ်းအားတွေရောယှက်လာမိရင်း ဘယ်လောက်ထိပြသနာတွေတက်ကြမလဲဆိုတာ…
Action Thriller ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Jacquie Davis ဆိုတဲ့သက်တော်စောင့်အမျိုးသမီးကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အတိတ်တွေကနေ ရှောင်ပုန်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးသက်တော်စောင့်ဆမ် ဖခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးနောက် အမွေတွေအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ခပ်ဆိုးဆိုးသူဌေးသမီးလေးဇိုဝီကို ပြန်ပေးဆွဲဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါ ဇိုဝီအမွေအားလုံးရသွားတာကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ မိထွေးရီမာရဲ့လက်ချက်လား ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားက အရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့အတူ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း Action Scenes တွေကို ဝေဝေဆာဆာကြည့်ရှုရမှာမို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါပဲ IMDB ၅.၆ ရရှိထားပါတယ်
ဇာတ်ကားအစကနေအဆုံးအထိဇာတ်ရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်သွားမယ့့်ကားကိုကြည့်ချင်ပါသလား ဒီကားကိုကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝအာမခံပါတယ် IMDB rating 7.2ရထားတဲ့ကားလေးပါ အဓိကပါဝင်သရုပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် woo sung jung ဒီကားမှာတော့ဗီလိန်နေရာကပေါ့ နောက်ထပ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးကတော့ Hyo Joo Han နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဝါရင့့်သရုပ်ဆောင်Kyung gu Sol တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါ ဇာတ်လမ်းအစမှာဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်တဲ့အခန်းကတဖြည်းဖြည်းဇာတ်ရှိန်မြှင့်အောင်ခေါ်သွားမှာပါ ဘဏ်ကိုဓားပြတိုက်ထဲမှာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကင်မရာကတွေ့လိုက်ပြီးမှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခေါင်းးဆောင်ဝမ်နဲ့သူ့လူတွေကမြို့ထဲမှာရက်တော်တော်ကြာအောင်လိုက်ရှာပြီးတရားခံတွေ့သွားတယ် တွေ့သွားတော့တရားခံရဲ့တိုက်ခန်းမှာကင်မရာတွေတပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတရားခံအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအမိဖမ်းဖို့လိုက်စုံးစမ်းပါတော့တယ် ခေါင်းဆောင်ဝမ်တို့ကထောက်လှမ်းရေးသာလုပ်ရတဲ့အတွက်ရန်သူခေါင်းဆောင်ကိုတွေ့ပေမယ်ဖမ်းလို့မရဘူးပေါ့ ရန်သူဘက်ကလဲတိကျစေ့စပ်တာလဲပါတာပေါ့ တစ်ဖက်ကဦးဆောင်တဲ့လူကလဲနောက်ဆုံးအလုပ်ကိုလက်ခံပြီးကိုရီးယားကနေထွက်ပြေးတော့မယ်အချိန်မှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှဘဲသူ့အလုပ်လာပေါက်ကြားပြီးနောက်ဆုံးမှာဖမ်းမိသွားပါတော့တယ် ရန်သူဘက်ကဗျူဟာတွေနဲ့ရဲဘက်ထောက်လှမ်းရေးဗျူဟာတွေကိုကြည့်ရှုခံရမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သည်းထိတ်ရင်ဖို လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ… လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မျက်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ကြယ်သီးတွေအစားထိုးတပ်ခံထားရတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ခံစားဖူးပါသလား ? မခံစားဖူးရင် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်လေးဆီသွားရအောင် တကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝမှာ ရင်ထဲထိအမြဲတမ်းစွဲကျန်စေခဲ့တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်… ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ကိုရာလိုင်း (Coraline) ဆိုတဲ့ကလေးမလေးက အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်… စူးစမ်းလိုစိတ်အပြည့်နဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့… သူမရဲ့မိဘတွေနဲ့ကတော့ အဆင်မပြေပါဘူး အလုပ်ကိုသာလုပ်နေကြတဲ့ ကိုရာလိုင်းရဲ့မိဘတွေဟာ သားသမီးကို ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ကြားမှာ အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်… တစ်နေ့သူတို့မိသားစုဟာ အိမ်အသစ်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရပါတယ်… ထုံးစံအတိုင်း ကိုရာလိုင်း ကတော့ တစ်ယောက်တည်းပဲပေါ့… ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ အိမ်ရဲ့တစ်နေရာက မှော်ဝင်တံခါးပေါက်တစ်ခုကို တွေ့သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ဇာတ်လမ်းစပါပြီ… ဒီမှော်ဝင်တံခါးပေါက်ရဲ့တစ်ဖက်မှာ ဘာတွေရှိနေမလဲ ?? စူးစမ်းတတ်ပြီး သတ္တိရှိတဲ့ ကိုရာလိုင်းတစ်ယောက် ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ ?? ဆိုတာတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… IMDb rating 7.7/10 ထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးဟာ ဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ အထူးတလည်ညွှန်းစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်.. အော်စကာဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာပါခဲ့တဲ့အပြင် ဆုတော်တော်များများကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်… မိဘနဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကြားက လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားလေးက ညွှန်ပြပေးသွားပါတယ်… လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီး လေကြောရှည်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားပေးခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး…
မင်းသားကြီး Jason Statham ရဲ့အမိုက်စား ခပ်ကြမ်းကြမ်းဇာတ်ကားပါ။ ကြေးစားလူသတ်သမားအချင်းချင်း အောက်လမ်းနည်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ကြံကြတဲ့ ကစားပွဲမှာ အသက်ရှင်ဖို့ အရာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်မယ့် Chev Chelios အဖြစ် Jason Statham ကို အမိုက်စားမြင်တွေ့ရမှာပါ။ IMDb (7) ထိရရှိထားတဲ့ Action , Crime , Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Amy Smart မှလဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့အပြိုင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။
Crank (2006) ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Jason Statham ရဲ့အမိုက်စား ခပ်ကြမ်းကြမ်းဇာတ်ကားပါ။ ကြေးစားလူသတ်သမားအချင်းချင်း အောက်လမ်းနည်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ကြံကြတဲ့ ကစားပွဲမှာ အသက်ရှင်ဖို့ အရာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်မယ့် Chev Chelios အဖြစ် Jason Statham ကို အမိုက်စားမြင်တွေ့ရမှာပါ။ IMDb (6.2) ထိရရှိထားတဲ့ Action , Crime , Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Amy Smart မှလဲ ဇာတ်လမ်းနဲ့အပြိုင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။
ဒရက်ဂူလာ ဟာသကားလေးပါ… မင်းသား Johnny Depp ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်က တင်ဆက်ပြသသော opera ကို ဇတ်လမ်းအဖြစ် ပြန်လည်ကာ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇၆၀ ခုနှစ်မှာ Collins Family ဟာ လီဗာပူးကနေ အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွေ့လာရာက ဇတ်လမ်းစထားတာပါ။ ၁၄ နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ မင်းသား Barnabas ဟာ အိမ်ဖော်အမျိုုးသမီးဖြစ်သူ Angelique နဲ့အချစ်ဇတ်လမ်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်တည်းက မင်းသားကိုပြုစားထားတဲ့ စုန်းမဖြစ်ပါတယ်။ အဲ Angelique ဟာ မင်းသားရဲ့ မိဘတွေကိုလဲခတ်ပစ်ပီး မင်းသားကိုလဲ မသေနိုင်တဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဝကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်….အခေါင်း တစ်ခုတွင်းမှာထည့်သွင်းကာ စီရင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၁၉၆ နှစ်အကြာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာတော့.. အလုပ်သမားတစ်ယောက်က မမျှော်လင့်ပဲ Barnabas ရဲ့ အခေါင်းကိုဖွင့်ပီး လွတ်စေခဲ့သောအခါ……. နောက် Victoria ဆိုတဲ့ကောင်မလေး…. မင်းသားနဲ့ဘယ်လိုပက်သက်မှာလဲ နောက်ဆုံး ကျိန်စာတွေပြယ်တဲ့အခါ ….. ဗစ်တိုးရီးယားကတော့ ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချလိုက်ပီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်… သူ့အသက်ကိုမင်းသားက ဘယ်လိုကယ်မလဲ။ ဇတ်လမ်းနားထောင်ရတာ ..စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို ကြောက်စရာထင်ရပေမဲ့ တကယ်လဲကြည့်ရော ရယ်နေရပါတယ် … ရယ်စရာ သရဲ (သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ) ဇတ်ကားလေးဆိုတော့ အပျင်းပြေစေမှာပါ။ ကြည့်လိုက်ရအောင်….။
မင်းသား Ethan Hwake,ဝါရင့်မင်းသားကြီးWillam defoe,မင်းသမီး Claudia Karvanတို့ ပါဝင်တဲ့ science fiction horrorဇတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်နီးပါး vampireတွေဖြစ်သွားပြီး ဆယ်နှစ်အကြာကာလမှာဇတ်အိမ်တည်ထားပါတယ် Edward Daltonအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Ethan Hawkeဟာ vampireတယောက်ဖြစ်သလို ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲဆရာဝန်တယောက်လဲဖြစ်ပါသည် တနေ့မှာvampireတွေအတွက်အစာရေစာဖြစ်တဲ့လူ့ သွေးတွေကုန်သလောက်ဖြစ် သွားတဲ့အခါမှာEdwardကိုအဲဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါတယ် အဖြေရှာရင်းနဲ့ တရက်အိမ်အပြနိမှာAudreyဆိုတဲ့လူသားကောင်မလေးတို့ အဖွဲ့ ကိုကယ်တင်ရင်းAudreyကနေတဆင့် အရင်ကvampireတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့Elvisအကြောငိးကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ Edwardတစ်ယောက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတာပရိတ်သတ်ကြီးရူစားရမှာဖြစ်ပါသည် ဒီဇတ်ကားကိုMicheal Spierigနဲ့Peter Spierigတို့မှရိုက်ကူးထားပြီး Budget $20millions မှာBox officeဝင်ငွေ $51.4millions ပြန်လည်ရရှိထားတဲ့ဇတ်ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်
ဒီကားက တခြားဂြိုလ်သားကားတွေနဲ့ လုံးဝကို ကွဲထွက်သွားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်… အစပိုင်းပဲကြည့်ရင်တော့ ပျင်းမှာမှန်ပေမယ့် ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲစိတ်ရှည်ရှည်ကြည့်လိုက်ပါ… ဒီဇာတ်ကားရဲ့အရှိန်က ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိကို ရိုးရိုးလေးနဲ့ တီဗွီရှေ့ကနေထမရအောင်ကို ဆွဲဆောင်သွားမယ်ဆိုတာ အသေချာပြောရဲပါတယ်.. ဒီကားကို ဂြိုလ်သားပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့သာ သိထားပြီး trailer တွေ၊ rating တွေ မသိဘဲနဲ့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နောက်မှ Imdb 8 နဲ့ RT 90% တောင် ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှန်းသိပါတယ်။ တကယ်လည်း ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း …………………… ဂြိုဟ်သားတွေ ကမ္ဘာကို သူတို့ရဲ့ အာကာသယာဉ် တစ်ခုခုချို့ယွင်းပြီး ရောက်ရှိလာတာပါ။ တောင်အာဖရိက ရဲ့ Johannesburg မြို့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ အချိန်အတော်အကြာ လှုပ်ရှားမှု မရှိဘဲ ရပ်တန့်နေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတွေကို ယာဉ်ထဲကို ဖောက်ထွင်း စစ်ဆေးဖို့ သွားကြတယ်။ အဲဒီမှာတော့ အစာရေစာ ငတ်မွတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်သား အများကြီးကို တွေ့ရပါတော့တယ်။ သုံးသပ်ချက်အရ အခုတွေ့ရတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေဟာ လုပ်သားအမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဂြိုဟ်သားတွေကတော့ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့ကို ခိုလှုံခွင့် ပြုခဲ့တာ နှစ် ၂၀ ကျော်တောင် ကြာသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ အရေအတွက်ကလည်း သန်းကျော်ရှိနေပြီ။ ဒေသခံလူတွေနဲ့လည်း ပရိပက္ခတွေ ဖြစ်တာပေါ့။ ဂြိုလ်သားတွေ ပုံစံကလည်း လူတွေနဲ့ တည့်အောင် မပေါင်းတတ်ကြဘူး။ သူတို့ဖာသာ စားစရာမရှိရင် အမှိုက်ပုံက ရှာစားတယ်။ ကြောင်စာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ လူတွေနဲ့ နားလည်အောင်တော့ စကားပြောတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကြည့်ရတာ လူ့သဘာဝကို လုံးဝနားမလည်ဘူး။ နောက်ဆုံး လူတွေနားမှာ ထားလို့ မဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို လူတွေနဲ့ ဝေးရာပို့ဖို့ လုပ်ကြရတာပေါ့။ အဲဒါကို MNU ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူထားတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်က Wikus van de Merwe၊ သူက MNU က အရာရှိတစ်ယောက်။ သူက ဂြိုဟ်သားတွေကို တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် ပြောင်းရွေ့ကြောင်း သဘောတူလက်မှတ်ထိုးဖို့ တာဝန်ယူရတယ်။ လူကလည်း နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင် ပုံစံမျိုး။ အဲလိုနဲ့ စာရင်းလိုက်ကောက်ရင်း ဂြိုဟ်သားမိသားစု တစ်ခုဆီရောက်လာတယ်။ အဲဒီ မိသားစုက ကမ္ဘာက ထွက်သွားနိုင်အောင် ကြံနေတယ်။ အခြား ကောင်တွေထက် ဉာဏ်ရည်မြင့်တယ်လို ပြောရမယ်။ သူတို့က အာကာသယာဉ်ကို အသက်သွင်းဖို့ လောင်စာအရည်တွေကို နှစ်၂၀လောက် ကြိတ်ပြီးရှာထားတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ Wikus အဲဒီ လောင်စာဘူးကို တွေသွားတယ်။ သူရဲ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုကြောင့် အဲဒီ အရည်နည်းနည်း မျက်နှာကို ပက်မိသွားတယ်။ အဲမှာဇာတ်လမ်းကစတော့တာပါပဲ… ဒီဇာတ်ကားကိုဘာကြောင့် ကြည့်သင့်သလဲ လူ့စိတ် သဘာဝကို ပါးပါးလေး ထင်ဟပ်တယ်။ အဲဒါက ပရိတ်သက်ကို တိုက်ရိုက်ထိစေတာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အစက ဂြိုဟ်သားတွေကို ကြည့်မရဘူး။ သူတို့ကြည့်ရတာ အသိဉာဏ်နိမ့်၊ အလကား ဂြိုဟ်သားတွေလို့ မြင်တယ်။ Inter-galactic travel ကို ဘယ်လိုထွင်လာလဲ ဆိုတာ ယုံတောင် ယုံစရာ မရှိဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မတူရင် မုန်းတယ်။ မကြိုက်ဘူး။ ကန့်ကွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဂြိုဟ်သားတွေ အကြောင်း Wikus နဲ့အတူသိလာတဲ့ အခါ သူတို့ကို နားလည်လာတယ်။ သူတို့က ရိုးသားတယ်။ ရိုးတယ်ဆိုတာက သူတို့က လူတွေလို့ မကောက်ကျစ်ဘူး။ ရန်တော့လိုတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လူတွေကို ကုတ်ဖဲ့ ပစ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒါကောင်းတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ပြတာ။ အဲဒီမှာ ခုနက ကိုယ့်ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေတတ်လာတယ်။ သူတို့မှာ လူတွေနဲ့ မတူတာက စည်းလုံးတယ်။ အဲဒီအချက်ကပဲ သူတို့ကို လူသားတွေထက် သာတဲ့ နည်းပညာကို တီထွင်နိုင်စေတယ်။ လူအားလုံး အဆိုးမဟုတ်သလို ဂြိုဟ်သားအားလုံးကလည်း ကောင်းချင်မှ ကောင်းမယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာ အခု ကျွန်တော်ပြောသွားထက် တွေးစရာ အများကြီးပါပါသေးတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဂြိုဟ်သားကား ကောင်းကောင်းဘာရှိလဲ မေးလာရင် District9ကို ထိပ်ဆုံးက ပြောမိမှာပါ။
Nicolas Cage ပါဝင်ထားတဲ့ Action, Crime, Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ… အမှန်တော့ မင်းသမီးချော Amber Heard ပါလို့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ ငရဲပြည်ကနေလာပြီးသောင်းကျန်းမယ့် ဇာတ်ကွက်နဲ့ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
၂၀၁၇ ထွက် ထိုင်း BL ကား အလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် BL ဆိုတာ ကို မထိတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ထိတွေ့ဖူးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးပါ BL ကားတွေရဲ့ အရသာကို ထိထိ မိမိ ခံစားစေနိုင်ဖို့ အတွက် အဆင်လေးတွေပါတဲ့ BL ကားကြီးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပါ ဒီကားကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဖာသာစိတ်ထိန်းကြဖို့တော့လိုတယ်နော့် စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ သူငယ် ပတ်ထောင်ရင်တော့ ကိုယ့် ကိစ္စနဲ့ ကိုပါပဲ ဒီကားကြည့်ပြီးရင် မိန်းမတွေအချစ်ကပဲ ကြောက်စရာကောင်းတာလား ယောကျာ်းတွေကပဲချစ်တတ်တာလား အတွေးပွားစရာပါ။ တကယ်တော့ ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ချစ်တတ်ကြတာပါပဲ ဒါပေမဲ့ သဘာ၀ ကိုလွန်ဆန်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ် မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်ကြပါတော့တယ် ဒီကားထဲမှာတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နမ်းခန်းတွေ ချစ်ခန်းတွေ တထောကြီးပါနေတာမို့ အေးအေးဆေးဆေး တယောက်ထဲ ကြည့်ပြီး ဖီးလ်ကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ် ကဲ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကို သွားလိုက်ကြရအောင် ကိတ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ကိတ်လဲကိတ် လှလဲလှ ချမ်းလဲချမ်းသာထက်လည်းထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတယောက်ပါ။ သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူ တေး ကိုရီးယားကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားရာကနေ (ကိုရီးယားဆိုကထဲကသိတယ်မလား ) အချိန်တန်လို့ပြန်ရောက်မလာတာနဲ့ စိတ်ပူနေပါတယ်။ သူ့အမျိုးသားဟာ ပွေရှုပ်တဲ့သူဖြစ်လို့ နောက်တယောက်နဲ့များ ဖောက်ပြန်နေမလားဆိုပြီး စုံစမ်းရာက သူ့ယောက်ျားဟာ မိန်းမရော ယောက်ျားကိုပါ သဘောကျတဲ့နှစ်ဖက်ချွန်ဖြစ်မှန်း သိလာပြီး သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက် ရတဲ့ အခါမှာတော့ ကိတ်တယောက် သူ့ယောက်ကျာ်းအတွက် စိတ်ပူပြီး သူ့ယောကျာ်းက Up လား Bottom လားကို စုံစမ်းရာမှ ကိတ်က သူ့ယောက်ျားကို ဘယ်လိုဖျောင်းဖျမလဲ … နောက်ကွယ်က အဆင်လေးတွေနဲ့ရှုပ်ထားတာတွေကို လက်ခံခွင့်လွှတ်ပေးမလား.. .ဒါမှမဟုတ် လက်လွှတ်ပေးလိုက်မလားဆိုတာကိုတော့… ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ကြည့်ကြရမှာပါ
အေးအေးနေတတ်တဲ့ ကော်ပီ ကူးတဲ့ အလုပ်သမား ဂျယ်ရီရှော တယောက် က အမေရိကန် လေ တပ်ကနေ ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊ သူနဲ့ အရမ်းတူတဲ့ သူ့အကို အီသန်ရှော ဟာ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားတဲ့နောက် မှာ သူ့အရမ်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အိမ်လခတောင် မှန်မှန်မပေးနိုင်တဲ့ ဂျယ်ရီရှော ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ ဒေါ်လာ ၇ သိန်း ကျော်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့အခန်းထဲမှာ လက်နှက်တွေ ၊ ခဲယမ်းမီးခြောက်တွေနဲ့ ပစ္စည်း ပစယတွေ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူသိပ်အံ့အားသင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘဲ သူ့လက်ကိုင်ဖုံးကို တဦးတယောက် က လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ ကိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဂျယ်ရီ့ အိမ့်ကို နောက် ၄ မိနစ်အတွင်း မှာဘဲ FBI က ဝင်ရောက်စီးနင်းတော့ မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ ဒါကြောင့် အခုဘဲ လွတ်အောင်ပြေးဖို့နဲ့ ပြေးဖို့နေရာကို ညွှန်ကြားပါတော့တယ်။ ဂျယ်ရီတယောက် မယုံမရဲဖြစ်နေစဉ်မှာဘဲ ၄ မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက် FBI ကနေ တရားမဝင်လက်နှက်တွေ သိုလှောင် ထားတဲ့ ဂျယ်ရီ့ကို ဝင်ရောက်ဖမ်းစီးပါတော့တယ်။ သူနဲ့တချိန်ထဲမှာဘဲ ရစ်ချယ် ဟောလိုမန်ဆို သူမိခင်တယောက် ကို သူ့ရဲ့ သားကလေး စီးနင်းလာတဲ့ ရထားကိုဖောက်ခွဲ ပြစ်တာမခံချင်ဘူးဆိုရင် ရှေ့နားက ဗန်ကားကို ဝင်ရောက်မောင်းနှင်ဖို့ ဖုန်းထဲ ကနေ အမိန့်ပေးခံရပါတော့တယ်။ ဘယ်သူကနေ ဒီလိုတွေ စီမံနေတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမယ့် အခြေအနေအတွေကတော့ ဖြင့် ကမောက်ကမ ဖြစ်လို့နေ ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေကို ညွှန်ကြားသူနဲ့ လုပ်ကြံခံရမယ့်သူဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရင်သပ်ရှုမော ဖွယ် တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Evil Death (2013)
ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ လက်တစ်ဖက်ပြတ် လွှစက်မင်းသား သရဲကား ကို မှတ်မိကြသေးလား The Evil Dead ပေါ့…ဒီ ကားဟာလဲ ထို Evil Dead ထဲက သစ်တော အိမ်လေး ထဲမှာပဲ ပြန်ရိုက်ထားတာပါ… ဇတ်လမ်း ပုံစံကတော့ ဒေးဗစ် ဟာ ညီမ ဖြစ်သူ မီယာ ဆေးဆွဲနေတာကို ကူဖြတ်ပေးကြဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမိဘပိုင် သစ်တောထဲက အိမ်တွင် ပျော်ပွဲစား ပုံစံ လာရောက်ကြပြီး ကူကြတာဖြစ်ပါတယ်…မီယာ ဆေးဖြတ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရာကနေ အသတ်သေတော့မလိုထိ ဖြစ်ခဲ့လို့ မီယာ အား အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ စုစည်းခဲ့ကြတာပါ…တစ်နေကုန် အဆင်ပြေနေခဲ့သော်လဲ မီယာ တစ်ယောက် ဆေးလိုအပ်သည့်အချိန် အရူးတစ်ယောက်လိုအော်ဟစ်ရင်း သောင်းကျန်းရာအပုတ်နံ့ရသည် ဆိုသဖြင့် ဒေးဗစ် က လိုက်လံရှာဖွေရင်း ဖုံးကွယ်ထားသော မြေအောက်ထပ်ကို စတင်တွေ့ရှိလိုက်ကြပါသည်…ထိုမြေအောက်ခန်းတွင်တော့ ဆေးစီရင်ထားသော ကြောင်သေများအပြင် သံဆူးကြိုးများ ခတ်နှိပ်ထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ် နှင့် မီယာ တို့သည် ထိုစာအုပ်အား မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေခဲ့သော်လဲ သူတို့၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူမှာစပ်စုပြီး စာအုပ်ပါ စာတစ်ချို့ကိုအသံထွက်ရေရွတ်မိလိုက်ရာ မခေါ်သင့် မနှိုးသင့်သော ပရလောက သားများအား နှိုးထစေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတော့မည်ကိုသူတို့ အဖွဲ့ မသိရှိခဲ့ရာ….
ဒီကားလေးကတော့မင်းသား Christian Baleခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ကားလေးပါ ဒီကားလေးက ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက animationဇတ်ကားတစ်ကားထွက်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ် တော်တော်များများလဲ ကြိုက်ကြတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ အီဂျစ် အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဆိုပိုသိမှာပါ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ကားလို့ပြောလဲမမှားပါဘူး ဇတ်လမ်းအကျဉ်းချုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟောစာတမ်းတစ်ခုကနေစရတော့မှာပါ အဲတုန်းကဟီဘရူးလူမျိူးတွေကို အီဂျစ်ဘုရင်က ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွင်းထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ဟောစာတမ်းအရ နန်းလုခံရမှာစ်ုးလို့အီဂျစ်ဘုရင်က ဟီဘရူးကလေးငယ်တွေအကုန်လုံးကို သတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်တစ်ယောက်တော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး ဟီဘရူးလူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုကျွန်အဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားပေးမလဲဆိုတာကြည့်ရမယ့်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမပြင် နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ကပ်ဘေးကြရောက်တဲ့ကခြေအနေတွေကိုလဲ မြင်တွေ့ရမှာပါ ဘုရင်တစ်ယောက်ရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ် အာဏာရှိမှုနဲ့ အီဂျစ် အလေ့အထ သဘောသဘာဝကိုပါ စိတ်ဝင်တစားမြင်တွေ့ရမှာပါ …
Horror ကားကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အဖို့ ကြည့်ဖူးသမျှထဲမယ် သူတို့ရဲ့ နှလုံးသည်းအူကို လှုပ်ရမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားများကို ပြောပါဆိုရင်
Final Destination တွေကို
ပြောကြမှာသေချာသလောက်ပါပဲ….ယ္ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ horror ကားတော်တော်များများမှာ အထူးသဖြင့် Jump scare မျိုး ဝုန်းကနဲ
ဒိုင်းခနဲ ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ ကားမျိုးတွေကို horror ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူသူတို့
အဖို့ ကြာလာတော့ အနည်းငယ်ရိုးအီလာသလိုပါပဲ…….Final Destination လို horror မျိုးကျတော့လည်း တကယ့်ကို သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်တဲ့အပြင်
.မင်း horror ဘယ်လောက် crazy ဖြစ်လဲဆိုတာကို Final Destination (1 to 5)
ကို စဆုံးကြည့်ဖြစ်လားဆိုတာမျိုးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရလောက်အောင် သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာပါပဲ… ယ္ခုလည်း New Line Cinema က
Final Destination Reboot ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
ဒီတော့ စဆုံးလေးကို ပြန်လည် ခံစားချင်သူများအတွက် အရည်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်….
လောလောလတ်လတ် 2017 မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ကားလေး First They Killed My Father ကတော့ အတ္ထုပ္ပတိ ကားကောင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သူပရိတ်သတ်ကြီးအဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးကို နာမည်ကျော်မင်းသမီး Angelina Jolie က ဒေါ်လာ 24 million အကုန်အကျခံကာ ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားပါ။Jolie ရဲ့ အရင် အတ္ထုပ္ပတိကား Unbroken ကားမှာကတည်းက ခေသူမဟုတ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရတာပါ။ အခုဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၇၅ခုနှစ်ကိုဇာတ်အိမ်ထားပြီး ၇နှစ်သမီးကတည်းက ကလေးစစ်သားအဖြစ် လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ Loung Ung တိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးအကြောင်းပါ။ jolie ရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ဘယ်လိုရိုက်ကူးပြီး ခေါက်ရိုးကျိုး Drama ကားတွေထဲကနေ ဘယ်လိုဖောက်ထွက်သွားလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ပါ လို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ၁၉၇၅ခုနှစ် ကမ္ဘောဒီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခမာနီအာဏာသိမ်းစဉ်က ငါးနှစ်အရွယ်ကောင်မလေးလောင်ကို အကြောင်းပြုပြီး ရိုက်ထားတာပါ အမေရိကန်ဗုံးကြဲတာ သမ္မတက အမေရိကန်ကျောထောက်နောက်ခံပြုတာတဲ့သူဖြစ်တာတွေကြောင့် လူအများဟာ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရယူပေးမယ်ဆိုပြီး ကတိပေး ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ခမာနီတပ်ထဲ ဝင်ကြ ထောက်ခံကြပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် ခမာနီတပ်ရဲ့ တစ်ကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို လူအနည်းကသာ သိကြပါတယ် ခမာနီတပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကောင်မလေး လောင်ဟာ ကလေးစစ်သားဖြစ်လာရပါတော့တယ် ကောင်မလေး လောင်ရဲ့ မိသားစုကရော ဘယ်လိုများ ဒုက္ခကြုံတွေ့လာရမလဲ သူတို့အားလုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ခမာနီတပ်တွေကရော ဘယ်လိုများရက်စက်ကြမလဲဆိုတာ……………
Oscarဆုရ မင်းသား Denezl Washingtonပါဝင်ပြီး ဒီကားရဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ Forrest Gump, Cast Awayတို့လိုကားမျိုးတွေရိုက်ကူးတဲ့ Director Robert Zemeckisပါ ။ Denzel Washingtonက လေယာဉ်ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ တစ်ရက်ကျတော့ ခရီးသွားရင်း လေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပျက်ကျပါတော့တယ်ဒါပေမယ့်ပိုင်းလော့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှူကြောင့် လူအနည်းသာ သေဆုံးခဲ့ရပြီး သူလဲ ပြည်သူတွေအတွက် Heroတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်….လေယာဉ်ပျက်ကျစဉ်ကဒဏ်ရာကြောင့်သူဆေးရုံတက်ခဲ့ရတယ် ဒါပေမဲ့ သူ ဆေးရုံက ဆင်းပြီးမကြာခင်မှာ လေယာဉ်မောင်းနေချိန်စဉ် တားမြစ် ဆေးသုံးစွဲခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ စွတ်စွဲမှုတွေ ဆေးသုံးတဲ့စွပ်စွဲမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ လေယာဉ် ဆင်းသက်မှူတွေကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရတာအတွက် တရားရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်…..
mmbusticketဒီဇာတ်ကားလေးဟာတော့ 2017 ခုမှထွက်ရှိခဲ့တဲ့ mystery triller film အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာကတော့ Jang Hang-jun ဖြစ်ပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Kang Ha-neul, Kim Mu-yeol, Moon Sung-keun နဲ့ Na Young-hee တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb rating 6.7/10 အထိ ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုကနေလန့်နိုးလာတဲ့ လူတစ်ယောက် (ဂျင်ဆော့) ။
သူဘေးနားမှာ သူ့အကိုရယ် ၊ သူ့အမေရယ် ၊ သူ့အဖေရယ် နဲ့ အိမ်အသစ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ဂျင်ဆော့အတွက် အိမ်အသစ်ကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပေမယ့်လို့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ထူးဆန်းစွာပဲ ဒီအိမ်ကို အရင်ကပဲ ရောက်ဖူးသလိုလို ခံစားနေရတယ်။ပြီးတော့ သူတို့ပြောင်းလာတဲ့အိမ်ရဲ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲက အသံတွေကိုလည်း ဂျင်ဆော့တစ်ယောက်ပဲ ထူးဆန်းစွာ ကြားနေရတယ်။တစ်ညမှာတော့ သူ့အကိုနဲ့သူ လေညှင်းခံထွက်ရင်း သူ့အကိုပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရ
တယ်။အဲ့ဒီနောက် ၁၉ ရက်မြောက်အကြာမှာ သူ့အကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး ထူးဆန်းတဲ့အမူအကျင့်တွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ဒါကို ဂျင်ဆော့တစ်ယောက် သဲလွန်စကနေတဆင့် လိုက်လံအဖြေရှာရင်း လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုတော့ ဒီလောက်ပဲပြောပြတော့မယ် ။ဘယ်လို အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ပြီးဆုံးသည်ထိကြည့်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်သွားမလဲဆိုတာတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ထိပ်လန့်ခြောက်ခြားစရာ၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကြိုက်တဲ့သူများအတွက် အရမ်းကြည့်ရတန်မယ့်ကားလေးပါ။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Atn Htet ပါ)
Velvet Buzzsaw(2019)IMDb….6.0,,Rotten….66%ဒီသရဲကားကတော့ ထူးထူးခြားခြား ပန်းချီကားနဲ့ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတယ်….တခြား horror တွေလို Jump Scare တွေနဲ့ ထိတ်လန့်အောင်လုပ်တဲ့ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး…သို့ပေမယ့်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရဲ့ ဖြစ်တည်ပုံကို ပရိတ်သတ်ကို အသေအချာလေးချပြပြီးမှ
ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပါ တစ်ဆက်ထဲပြသွားတာမို့ ကြည့်ရှုတဲ့သူက တစ်စိမ်စိမ့် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ထိပ်လန့်မိတာမျိုး …..ကြောက်ကလည်းကြောက် ဘာဆက်ဖြစ်ဦးမလဲဆိုတဲ့ စူးစမ်းချင်စိတ်ကလည်းထိန်းမရဆိုတဲ့ ဇတ်ကားမျိုးလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး..ဒီကားထဲက အဓိကမင်းသားဖြစ်တဲ့ Jake Gyllenhaal ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်…သူကတော့ ပန်းချီလောကမှာဆို သိပ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ Reviewer တစ်ယောက်ပါ..သူညွှန်းဆိုတဲ့ပန်းချီကားဟေ့ဆိုရင်
အရမ်းကိုအောင်မြင်ဖို့ရာနှုန်းပြည့်ပါပဲ…ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကို ဆန်းပြားလွန်းတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရောက်လာချိန်မှာတော့…ကိုင်း horror ကားကြိုက်တဲ့ပရိတ်သတ်တို့ရေ…ပန်းချီကားက ဘယ်လိုပန်းချီကားမို့လဲ…ဘယ်လိုကံကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့အတူ ပန်းချီကားနဲ့ ပါလာမလဲ…ဘယ်လောက် လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြရလဲ…ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ဦးဗျို့……တစ်ခုပြောချင်တာက ကားသစ်ထဲက horror ကားကောင်းတစ်ကားပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားဘူးထင်တယ်….
IMDB- 7.7/10 ….Rotten…94%ရရှိထားတဲ့
ဒါရိုက်တာကတော့ Good Will Hunting နဲ့
လက်စွမ်းပြထားတဲ့ Ben Affleck ဖြစ်ပါတယ်
(Morgan Freeman ကြီးကိုလည်း သူနဲ့
(၁) ဘယ်သူက မှန်လဲ?
(၂) မှန်ကန်တဲ့အဖြေဆိုတာရော ရှိခဲ့လား?
ဒီတစ်ခါ Review ကို မရေးဘဲ
နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အချိ့ ခံစားရှုမြင်ခဲ့တဲ့အပေါ်
Spoil မဖြစ်စေအောင် ရှောင်ရင်း
Gone Baby Gone ဟာ ကလေးသူငယ်ပြန်ပေးမှုအကြောင်းနဲ့
အဲဒါတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘဝတွေ အကြောင်းကို
ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
အစကနေအဆုံးထိ ပျင်းစရာ ကောင်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ဇာတ်ကားရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ
ဒီဇာတ်ကားက တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Ben Affleck ဟာ ဘော်စတွန်မြို့ရဲ့လမ်းမပေါ်က ဘဝတွေကို
ဇာတ်ကားက မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောမိမယ့်
အချိန်တွေမှာ သူပေးချင်တဲ့ Message တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ထုတ်ပြသွားပါတယ်။
Ben ဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အာရုံကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖမ်းစားရမလဲဆိုတာ
ဒီဇာတ်ကားဟာ ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပါတယ်
“မှန်မယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုတာ နောက်ဆုံးမှာ
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ရိုးသားခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုလှလှပပဖော်ကျူးပြီး တစ်ဆက်ထဲမှာပင် ဘဝရဲ့အလှတရားတွေကို
ဂရုမစိုက်တော့ကြတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။
ကလေးသူငယ်တွေကို ဒီထက်ပိုပြီး ကြင်နာမယ်၊ စာနာမယ်၊
ခင်ဗျားတို့ဟာ ရင်ဘတ်ဗလာနဲ့ လူသားတွေပါပဲ။
Soul hunters တစ်နည်းအားဖြင့် soul collectors တွေဟာ မိမိတို့အသက်တွေ ရောင်းစားပြီး demon တွေနဲ့ အပေးအယူ လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းရတာပေါ့ ဒါပေမယ့်သူတို့ဖမ်းတာလူကိုမဟုတ်ပါဘူူး အဲ့လူရဲ့တမလွန်မှာအဖိုးတန်ဆုံးအပိုင်း ဖြစ်တဲ့ ဝိညာဉ်တွေကိုပါ special force agent တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မားကတ်စ် ဟာ သူဦးဆောင်ရတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ ဆုံးရှုံးမှုတွေနောင်တတရားတွေ တဗွေ့တဗိုက်ကြီးရလာခဲ့ပါတယ် လောကကြီးမှာ ဆုံးရှုံးစရာဘာမှ မကျန်တော့တဲ့ မားကတ်စ်တစ်ယောက် demon တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ရေကယ် နဲ့ အပေးအယူတစ်ခုလုပ်ပြီး soul hunter တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ …… ဒီကားဟာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ low budget ကားမှန်းတန်းသိပါတယ် dialogueလေးတွေကားအစပိုင်းမှာပေါ့ တယ်နောက်ပိုင်း scene တွေမှာ အရသာပိုပေါ်လာတယ် setting နဲ့ visual effect ပိုင်းတွေမှာ low budget ဖြစ်လို့ သိပ်အားရစရာမရှိဘူး သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ အပြစ်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူး plot ကတော်တော်လေးကို မိုက်တယ် low budget သာ မဟုတ်ခဲ့ရင် အတော်ပေါက်လောက်မယ့် ကားမျိုး တစ်ကားလုံး dark ဖြစ်နေတာက ကြည့်ရတာ ဝိုးတဝါးဖြစ်စေတယ် action sceneတွေ သမားရိုးကျဆန်လွန်း တယ်… အားရတဲ့အပိုင်းကတော့ plot နဲ့ dialogue လေးတွေပါပဲ demon ဆင့်ခေါ်တာတွေ အိန်ဂျယ်တွေ အပြင် underworld စတားကြီးပါတွေ့မြင်ရမှာ ဆိုတော့ ဘာသာရေးဖက်က သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများပါတဲ့ အတွက် plot ပိုင်းဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲ ရိပ်မိနိုင်ပါတယ် rating ကတော့ IMDb မှာ 6.2 အထိရထားပါတယ်
mmbusticketဒီတစ်ခါတော့ Channel Myanmarပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘောလိဝုကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတော့ Missing (2018) ပါ။အချစ် ဟာသ ကားတွေနဲ့ငြီးငွေ့နေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီ Drama Thriller အမျိုးအစား ကားလေးကအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။Ratingအနေနဲ့ကလဲ Imdb Rating 6.2/10 လောက်ရထားတာဆိုတော့ ကုလားကားတစ်ကားအနေနဲ့မဆိုးဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုလဲ အားလုံးမြည်းစမ်းကြည့်ရအောင်တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ အေးအေးလူလူ အပန်းဖြေခရီးထွက်လာတဲ့မိသားစုတစ်စု…ဖခင်ဖြစ်သူ Sushantရယ် မိခင်ဖြစ်သူ Aparnaရယ် သုံးနှစ်အရွယ်သမီးလေး Titli တို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုကိုအလည်အပါတ်ရောက်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာပဲ သမီးလေး Titli ကအပြင်းဖျားပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ အပြင်းဖျားနေတဲ့ကလေးလေး ပျောက်ချင်းမလှပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။နယ်မြေရဲတွေကိုသတင်းပို့တိုင်ချက်ဖွင့်သော်ငြား အခြေအနေထူးမလာခဲ့ပါဘူူး။အဲ့အချိန်မှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သံသယတွေဝင်ကာအခြေအနေတွေက တစ်စတစ်စတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးပျောက်ဆုံးသွားမှုအပေါ်ဘေးလူတွေဝိုင်းသုံးသပ်မှုတွေနဲ့ ဒီပျောက်ဆုံးမှုဟာသွေးရိုးသားရိုးရောဟုတ်ပါသလား?ဘယ်သူ့ပယောဂကြောင့်များပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလဲ?ပြန်ရောတွေ့ပါ့မလား?စတဲ့သို့လောသို့လောမေးခွန်းတွေနဲ့ အဆုံးအထိ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှူသွားရမယ့်ကားလေးတစ်ကားပါ။ဒီကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Missing (2018)ဖြစ်ပြီး CMပရိသတ်ကြီးအတွကိတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Metro Manila ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2013 ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ British ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ် IMDb 7.6 , Rotten tomatoes 94%ထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့ Jake Macapagal,John Arcilla,Althea Vega တို့အဓေိကပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ Banaue မှာနေထိုင်တဲ့လယ်သမားလေး Oscar တစ်ယောက် စီးပွားရေးမကောင်းတာကြောင့် ဇနီးနဲ့သားသမီး ၂ယောက်ကိုခေါ်ကာ Manila မြို့ကြီးဆီပြောင်းရွှေ့လာပါတယ် သို့သော်အလိမ်ခံရတာကြောင့် တိုက်ခန်းပြောင်းပေးရပြီး ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် လေးဆီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပါတော့တယ် ကံကောင်းထောက်မပြီး Oscar တစ်ယောက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုံခြုံရေးအရာရှိအနေနဲ့အလုပ်ရခဲ့ပါတယ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Ong ကလည်း မိသားစုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ် သို့သော် ဒါတွေက တစ်ကယ်ပဲကံကောင်းခြင်းတွေလား……Ong ကရောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းလား…..သူတို့မိသားစုမြို့ကြီးမှာဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုသူတို့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
သင် လူတွေကို အလွယ်တကူယုံကြည်တတ်ပါသလား… ရိုးသားလွန်းတဲ့…ယုံကြည်လွယ်လွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ရတာ အန္တရာယ်များလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိမ်ရတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ဒီ Liar Game ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးက ဂျပန်ကားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ ကြည့်ပျော်စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ။ လှည့်ကွက်များစွာနဲ့ တဖြေးဖြေးဆွဲဆောင်သွားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ IMDb Rating (7.3) ထိရရှိထားပါတယ်။Liar Game ဆိုတဲ့ ဂျပန်စီးရီးကို အခြေပြုဖန်တီးတင်ဆက်ထားပြီး ကိုရီးယားစီးရီး Liar Game အဖြစ်လဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ Liar Game ဇာတ်ကားအဆက် Liar Game 2:Reborn ဇာတ်ကားလဲ ၂၀၁၂ မှာထပ်မံထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်…https://channelmyanmar.org/?s=liar+game မှာရှာပါ။
ရက်စက်သွားတဲ့ ချစ်သူကို ရက်ရက်စက်စက် ပြန်လည် ဂလဲ့စားချေမယ့် ကျားနာမလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။
မင်းသမီးအသစ်နဲ့ ထပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ပထမဇာတ်ကားနဲ့ အဆက်အစပ်မရှိပါဘူး။ ဆက်စပ်တာကတော့ ဇာတ်နာနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပြန်လည်လက်စားချေတဲ့ ဇာတ်လမ်းပုံစံတူတာပါပဲ။
Hate Story3က ရှေ့က Hate Story (1,2) နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ထားပါဘူး။ဇာတ်ကားနာမည်တူတာနဲ့ အမုန်းတစ်ခုကို ကလဲ့စားချေတာပဲ တူပါတယ်။မင်းသားနှစ်လက် မင်းသမီးနှစ်လက်နဲ့ အမုန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းကြမှာပါ။
အားလုံးစောင့်မျော်နေကြတဲ့ Hate Story-4လာပါပြီခင်ဗျ။Hate Storyရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဇာတ်လမ်းရဲ့မြုပ်ကွက်တွေလှည့်ကွက်တွေနဲ့ ရင်မောစွာကြည့်ရှု့ရဦးမှာပါ။Hate Story ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့ဦးမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အိန္ဒိယမှာသြဇာကြီးမားပြီး မြို့တော်ဝန်ရာထူးအတွက်ပါရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ပြိုင်နေတဲ့ ‘ကူးယားနား’မှာ သားယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဟာ အပျော်ရှာရင်းတစ်နေ့မှာတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လူသတ်မှုကျူးလွန်မိခဲ့ပါတော့တယ်။ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပေမယ့် တရားဥပဒေကိုငွေနဲ့ကိုင်ပေါက်နိုင်ခဲ့အတွက် သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဟာ ရာဇဝတ်မှုမသင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အသတ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးရဲ့ညီမ ဖြစ်သူက အငြိုးထားကာ လက်စားချေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကိုအတွက် ဘယ်လိုအကွက်တွေချပြီးလက်စားချေမလဲ၊ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေအသုံးချမလဲ၊အငြိုးဇာတ်လမ်းတွေဖွဲ့ပြီး လက်စားချေမှုမှာ အောင်မြင်မှုရသွားမလားဒါမှမဟုတ် သြဇာကြီးမားတဲ့ ကူယားနားမိသားစုကပဲ ငွေနဲ့ကိုင်ပေါက်ပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမလား…….တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အငြိုးတွေဖွဲ့တဲ့ Hate Storyထဲမှာ ဘယ်သူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုတော့…..Hate Story-4ထဲမှာပဲ ရင်သပ်ရှုမောစွာ ခံစားလိုက်ပါဦး။18+ အခန်းတစ်ချို.နဲ့ မလုံ့တလုံ အဝတ်အစားတွေနဲ့ လန်ထွက်နေတဲ့ဘာလိဝုမင်းသမီးအလန်းလေးတွေပါတာကြောင့် မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး
အေးချမ်းသာယာနေတဲ့ မိသားစုလေးဟာ အိမ်အသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလာခဲ့တယ်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဂျော့ချ် တို့ လင်မယား ရယ် ကလေး ၃ ယောက်ရယ်ပေါ့တစ်နေ့မှာတော့ အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူ ဒေါလ်တွန် တစ်ယောက်အိပ်နေစဉ် အချိန်တွေမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို မြင်နိုင်ခဲ့ပြီးထို မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလဲ လူ့လောက ကို ကူးလာဖို့အတွက် ဒေါလ်တွန် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို လိုချင်တဲ့အတွက် မိသားစု ကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးပါတော့တယ်တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ ရလုဆဲဆဲ အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ပရလောက ကို မယုံတဲ့ ဂျော့ချ် ဟာ ပရလောက နှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သောအဲလိစ် ကို ခေါ်ဆောင်ပြီး သားဖြစ်သူ ဒေါလ်တွန် ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စကို ကူညီခိုင်းခဲ့သော အခါ
In Fear ဇာတ်ကားကတော့ Director: Jeremy Lovering ရဲ့ ရိုက်ကွက်တွေကို သဲထိပ်ရင်ဖိုခံစားရမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။>IMDb Rating 5.5/10 >Rotten Tomatoes Rating 83%ဒီထဲမှာဆိုရင် Iain De Casestecker , Alice Englert နဲ့ Alien Leechတို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ Tomနဲ့ Lucy ဆိုတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတစ်တွဲကနေ ဇာတ်လမ်းစထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်သူစုံတွဲဟာဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း ၂ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ Tom က Lucyကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညဘက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲသွားဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် Tom ဟာ Kilairneyဆိုတဲ့ Hotel မှာလည်း နှစ်ယောက်သားအတူတူအိပ်ဖို့ Online ကနေ ဘိုကင်လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Hotel ဟာဆိုရင်တော့ လူနေအိမ်တွေနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့ တောလမ်းတောက်လျောက်ရဲ့အစွန်တစ်နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Tom နဲ့ Lucyတို့အတွဲ ထို Hotel ကို ကားဖြင့်သွားကြစဉ် လမ်းခရီးက တော်တော်ဝေးပြီးရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် Hotel သို့ရောက်ရာတွင် Tom က အခန့်မသင့်ပဲ ထိုမှ ဒေသခံများနှင့်ရန်ဖြစ်သဖြင့် ထို Hotel တွင် အိပ်မရဘဲ လမ်းခရီးတောက်လျောက်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် ပြန်လာသည့်အချိန်မှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် လမ်းများကို သေချာမသိတော့ဘဲ လမ်းပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်တော့ လမ်းပျောက်နေတာ သူတို့အတွက် ကြောက်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါ. တကယ့်ကြောက်စရာကတော့…. ဘာလဲဆိုတာသိချင်ရင် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆက်လက်ရှု့စားကြပါတော့…။ ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်တော့ ဇာတ်ကားနာမည် In Fearဆိုတဲ့အတိုင်း ကြောက်မက်ဖွယ်အရသာကို ပေးစွမ်းမယ့် Horror,Mystery,Thrillerဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရှု့သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ere Comes The Devil ဇာတ်ကားကတော့
Director : Adrian Garcia Bogliano ကိုယ်တိုင်ရေးသား
ရိုက်ကူးထားတဲ့ Mexican Horror , Thriller
ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ IMDb Rating – 5.6/10
အောက်ထပ်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းကို လူတစ်ယောက်ကသတ်နေတာကို
ထိုလူသတ်သမားကို အနောက်မှ တုတ်ဖြင့်
ထိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။နှစ်တွေကြာပြီးနောက် မိသားစုတစ်စုက
တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ဂူတစ်ဂူထဲကို ဝင်မိပြီး
ထူးဆန်းစွာ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဒေသခံတွေက ထိုဂူကို ကျိန်စာသင့်နေတာလို့ပြောကြတယ်။
Here Comes The Devil ဇာတ်ကားကတော့ Director : Adrian Garcia Bogliano ကိုယ်တိုင်ရေးသား ရိုက်ကူးထားတဲ့ Mexican Horror , Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ IMDb Rating – 5.6/10 Rotten Tomatoes – 72% ***ဇာတ်လမ်းအညွှန်း***ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းအစမှာဆိုရင် Lesbianနှစ်ယောက် ချစ်ရည်လူးနေတာကနေ ဇာတ်လမ်းစထားပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်ရည်လူးပြီးလို့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ အောက်ထပ်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းကို လူတစ်ယောက်ကသတ်နေတာကို မထင်မှတ်ဘဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထိုလူသတ်သမားကို အနောက်မှ တုတ်ဖြင့် ရိုက်လိုက်သောကြောင့် ထိုလူသတ်သမားက သေနိုင်လောက်သော ဒဏ်ရာဖြင့် တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်သို့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုလူသတ်သမားရဲ့အလောင်းကိုတော့ ထိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။နှစ်တွေကြာပြီးနောက် မိသားစုတစ်စုက ထိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာ လာရောက်အပန်းဖြေကြပါတယ်။ ထိုမိသားစုမှ ကလေးနှစ်ယောက်က ဟိုးနှစ်တွေကြာခဲ့တုန်းက လူသတ်သမားပျောက်သွားခဲ့သော တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ဂူတစ်ဂူထဲကို ဝင်မိပြီး ကလေးနှစ်ယောက်လုံး ထူးဆန်းစွာ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဒေသခံတွေက ထိုဂူကို ကျိန်စာသင့်နေတာလို့ပြောကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ မကောင်းဆိုးရွားဂူလိုပြောကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရှု့စားကြပါတော့…။
<p>Triple Threat(2019)IMDb&hellip;.7.5Ong Bak မင်းသား တိုနီဂျား၊ The Raid ရဲ့ မင်းသား Iko Uwais နဲ့ ထိုက်ချိမင်းသား တိုက်ဂါးချန်း တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကို တင်ပေးထားပါတယ်။ဗီလိန်နေရာမှာတော့ ဘွိုင်ကာ မင်းသားကြီး စကော့ အက်ဒ်ကင်း ပါဝင်ထားတာမို့ ဘယ်လောက်ကြမ်းကြမလဲ ပြောဖို့မလိုလောက်တော့ပါဘူး။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရာဇဝတ်မှုတွေ မြင့်တတ်နေတဲ့မဟာဂျာယာမှာ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနှိမ်နင်းရေးအတွက်
အကြီးအကျယ်လာလှူဒါန်းတဲ့ တရုတ်မလေးထန်းရှောင်ရှန်းကို ကော်လင်တို့ ကြေးစားအဖွဲ့က လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားတာမှာ ဟို ဂျပုသုံးကောင်နဲ့ တွေ့တာပါပဲ။ သူတို့ သုံးယောက်နဲ့ ကော်လင်တို့က အရင်ကတည်းက ရန်ငြိုးရှိသူတွေပီပီ အတိုးရော အရင်းရော ပေါင်းပြီးဆပ်ကြပါတယ်။အကျဉ်းပြောရရင်တော့ ချတဲ့ကားပါ။ ချပါတယ် အားတိုင်း။ သေနတ်ရှိရင်တောင် ဘေးချပြီး ချပါတယ်။ တွေ့ရာနေရာမှာ အားတိုင်းချပါတယ်။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြည့်တဲ့သူပါ ချချင်နေလိမ့်
မယ်&hellip;ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Little Neo ပဲဖြစ်ပါတယ်&hellip;</p>